privacy | Lottery.com
Last updated: မတ်လ 1, 2020
သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ ဝေမျှသည်ကိုဂရုပြုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီး AutoLotto, Inc. (dba Lottery.com,“ the Company”,“ ငါတို့”၊ “ ငါတို့”၊ “ us”) သည်သင်၏ privacy ကိုဂရုစိုက်သည်။ ဤ Privacy Notice မှ Lottery.com သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (“ ထုတ်ကုန် (၀ ယ်ယူခြင်း) မှသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ (ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့်ပြစ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအထူးအမျိုးအစားများနှင့်ဒေတာများ မှလွဲ၍) မည်သို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြုသည်နှင့်သိုလှောင်ပုံကိုရှင်းပြသည်။ s) ") ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့ကာကွယ်ကြောင်းနှင့်သင်၏ privacy အခွင့်အရေးများနှင့်ဥပဒေကသင့်အားမည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ တစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုသောဝေါဟာရများစွာကိုနားလည်ရန်ဤသတိပေးချက်၏“ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ” အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကအောက်ဖော်ပြပါ“ California to Residents to note” အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အချို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ သင်၏အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်အလေ့အကျင့်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရွေးချယ်နိုင်သောရှင်းပြချက်များကိုဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သတိပေးချက်ကိုပေးသည်။ “ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဏ္Sectionတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်တိကျပြီးလက်ရှိဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်ပြောင်းလဲသွားပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုနှင့်ထုတ်ဖော်မှုအလေ့အကျင့်များ၊ သင်၏သဘောတူညီမှုရွေးချယ်မှုများသို့မဟုတ်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးလိုလျှင်စိုးရိမ်ခြင်းရှိပါက support@lottery.com သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးဆက်သွယ်ပါ -
AutoLotto, Inc (dba Lottery.com)
20808 ပြည်နယ်အဝေးပြေး 71 W, ယူနစ် B က
ဤထုတ်ကုန်တွင်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ချိတ်ဆက်မှုများ၊ plug-in များနှင့် application များပါဝင်နိုင်သည်။ ထိုလင့်ခ်များကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုဆက်သွယ်မှုများကိုဖွင့်ခြင်းကသင်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုအခြားသူများအားစုဆောင်းသို့မဟုတ်မျှဝေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်ပါ။ သူတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မှသင်ထွက်ခွာသောအခါသင်ကြည့်ရှုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုင်း၏ privacy သတိပေးချက်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အမည်၊ သမီး၊ နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ လမ်းလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်တို့ပါဝင်သည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက် ငွေလွှဲခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအတွက်လိုအပ်သောငွေပေးချေကဒ်များနှင့်ဘဏ်အချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအချက်အလက်တို့ပါ ၀ င်သည်။
စျေးကွက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Happiness team ကိုဆက်သွယ်ခြင်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်အစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်သင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့နိုင်သည့်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ပူးတွဲဖိုင်များကဲ့သို့သောနောက်ထပ်အချက်အလက်များနှင့်သင်ပေးအပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သောအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်စျေးကွက်အီးမေးလ်ကိုမဆိုပယ်ဖျက်လိုပါကသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများလည်းရပါလိမ့်မည်။
အလုပ်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ရန်လျှောက်ထားလျှင်သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအွန်လိုင်းမှတင်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြုံစသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်သင်ရွေးချယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူပါမည်။
တည်နေရာအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်သုံးသောအခါသင်၏အထွေထွေတည်နေရာအချက်အလက် (ဥပမာ၊ သင်၏အင်တာနက်ပရိုတိုကော (“ IP”) လိပ်စာသည်သင်၏ယေဘုယျပထ ၀ ီနယ်မြေကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ )
ကိရိယာအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရယူရန်သင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား၊ လည်ပတ်မှုစနစ်ဗားရှင်း၊ ဖုန်းသယ်ဆောင်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ၊ အက်ပလီကေးရှင်းတပ်ဆင်မှုများ၊ စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား၊
ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသောသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူခြင်းသို့မဟုတ်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြခံယူခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏လှည့်လည်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အခြေခံ၍ သင်၏ဝယ်ယူမှု ဦး စားပေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ကွတ်ကီးနှင့်အလားတူနည်းပညာများမှသတင်းအချက်အလက်။ ငါတို့နှင့်တတိယပါတီမိတ်ဖက်များသည် cookies, pixel tag များသို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာများကို သုံး၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီမိတ်ဖက်များကသင်၏နည်းပညာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အချိန်နှင့်အမျှ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးတွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ဤနည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။ ကွတ်ကီးများသည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သိမ်းထားသောစာသားဖိုင်ငယ်များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ session cookies များကိုနှင့်မြဲ cookies များကိုနှစ် ဦး စလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ browser ကိုပိတ်ပြီးနောက် session cookie သည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သင်၏ဘရောက်ဇာကိုပိတ်ပြီးနောက်တည်မြဲသောကွတ်ကီးသည်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါသင့်ဘရောက်ဇာကအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏ cookie ဆက်တင်များကိုပြုပြင်ရန်သင့်တော်သောနည်းလမ်းကိုလေ့လာရန်သင်၏ web browser ၏“ Help” ဖိုင်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည် cookies များကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းမပြုရန်ရွေးချယ်ပါကအချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်လက်လှမ်းမမှီနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။
အလိုအလျောက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပညာများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သင်ဆက်သွယ်စဉ်၊ အချို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင်၏ရှာဖွေခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းပုံစံများနှင့်စက်ပစ္စည်းများအကြောင်းအလိုအလျောက်စုဆောင်းသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းဖိုင်များနှင့်ကွတ်ကီးစသည့်နည်းပညာများမှတဆင့်စုဆောင်းသည်။
တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ - အီးမေးလ်၊ ဖုန်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်ထုတ်ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သင့်အကောင့်ကိုအတည်ပြုပါ; (ထီအနိုင်ရရှိမှုအတွက်) ကျွန်ုပ်တို့ထံမှငွေပေးချေမှုကိုခံယူခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ၀ ယ်ယူခြင်း။ လှူဒါန်းရန် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါသို့မဟုတ် "ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ" တောင်းဆိုမှုကို; စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုတောင်းဆိုရန်၊ ချွေတာခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး။
တတိယအဖွဲ့အစည်းများ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လူမှုရေးမီဒီယာများကဲ့သို့တတိယပါတီများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှသင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်သည်။ ဗီဒီယို၊ ထီဂိမ်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြားရာပူဇော်သက္ကာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုနှင့်သင်ထိတွေ့နိုင်သည်။ သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်များ၊ plug-in များသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများမှသို့မဟုတ်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်နှင့်ထိတွေ့သောအခါသင်၏အများပြည်သူဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်မှသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာ၏လည်ပတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
တရားဝင်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်အခါ။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့် ၀ င်ရောက်တော့မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ (သို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏အကျိုးစီးပွားများ) နှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အခြေခံအခွင့်အရေးများအတွက်လိုအပ်လျှင်၎င်းအကျိုးစီးပွားများကိုမကျော်လွှားနိုင်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန်တရား ၀ င်အခြေခံအဖြစ်ခွင့်ပြုချက်ကိုအားကိုးအားထားပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲ push notifications များ၊ အီးမေးလ်များ၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်သင့်အားတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်မှုများပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်မဟုတ်ပါ။ support@lottery.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်၊ သို့သော်အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်သာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ -
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်၏စာရင်းဖွင့ ်၍ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်
သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုများအားစီမံခန့်ခွဲခြင်းအပါအ ၀ င်သင့်ထံမှနှင့် ၀ ယ်ယူရန်
သင်နှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင့်အားအသိပေးရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီများကိုလိုက်နာစေရန်၊ ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကိုစုံစမ်းရန်နှင့်ဥပဒေများ၊ ဆင့်ခေါ်မှုများ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်များသို့မဟုတ်အလားတူဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလိုက်နာရန်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအားရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝေမျှခြင်းမပြုပါ။
Affiliates နှင့်လက်အောက်ခံ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်များနှင့်ခွဲဝေသူများကိုဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
ရောင်းချသူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သောထိန်းသိမ်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေနိုင်သည်။
Third-Party App ပေါင်းစည်းခြင်း - အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့တတိယပါတီလျှောက်လွှာကိုဆက်သွယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုတတိယပါတီနှင့်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်သည်။
Analytics လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics ကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကို သုံး၍ အချို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းစုဆောင်းနိုင်သည်။ သင်သွားပြီး Google ၏အလေ့အကျင့်များကိုလေ့လာနိုင်သည် https://www.google.com/policies/privacy/partners/မှာရရှိနိုင်သည့် Google Analytics opt-out browser add-on ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့မှထွက်ခွာပါ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်စိတ်ဝင်စားမည်ဟုထင်သောကြော်ငြာများကိုပြသရန်တတိယပါတီကြော်ငြာမိတ်ဖက်များနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤကြော်ငြာမိတ်ဖက်များသည်မိမိတို့၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် cookies များ၊ pixel tag များနှင့်အလားတူနည်းပညာများကို သတ်မှတ်၍ ရယူနိုင်သည်။ သူတို့ကအချိန်နှင့်အမျှကွဲပြားခြားနားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင်သင်စုဆောင်းနိုင်သည်။ အကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ရှာဖွေခြင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းမှထွက်ခွာရန်ရွေးချယ်စရာများအကြောင်းလေ့လာရန် ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ။ www.aboutads.info/choices သို့မဟုတ်သင်အီးယူ၌ရှိလျှင်, www.youronlinechoices.eu/။ သင်၏မိုဘိုင်း operating system မှကြော်ငြာများကိုကန့်သတ်ရန်မည်သည့်ဆက်တင်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှစိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာများကိုသင်မည်ကဲ့သို့ငြင်းပယ်နိုင်သည်ကိုပိုမိုသိရှိရန် AppChoices မိုဘိုင်းအက်ပ်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အမည်ဝှက်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပုံစံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် (i) အမျိုးမျိုးသောအစီရင်ခံခြင်းတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာခြင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားအလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်း၊ (ii) စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, (၃) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ အလေ့အထများနှင့်အသုံးပြုမှုပုံစံများ၊ အစီအစဉ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကြော်ငြာများ၊ အမည်မဖော်လိုသောဒေတာသည်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်၏ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောနည်းကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။
ဥပဒေနှင့်အလားတူထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်အတိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါကအောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် - (၁) တရားရေးအမိန့်၊ ဆင့်ခေါ်စာသို့မဟုတ်ပြည်သူ့အာဏာပိုင်များမှအခြားတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအ ၀ င်ဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်းဆိုမှုများနှင့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလိုက်နာရန်၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်း၊ (၂) သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ပါ။ (၃) သင်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ (သို့) အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်။ သံသယမဖြစ်စေရန်သင်၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် (သို့) မှတစ်ဆင့်မကျေနပ်ချက်များကိုဖော်ပြပါကသင်၏အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
Merger, Sale, သို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အခြားသတင်းအချက်အလက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အကြံပေးများ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီများသို့ကျွန်ုပ်တို့အခြားကုမ္ပဏီနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်ကော်ပိုရိတ်ငွေပေးငွေယူခြင်းများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလွှဲပြောင်းပါ။ ဤအဖြစ်အပျက်များမှအပသင်၏အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များအတိုင်းလိုက်နာရမည်။
ခွင့်ပြုချက်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သင်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်တောင်းခံရန်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှုများကိုမွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်ကန့်ကွက်ရန်၊ သင့်လျှော်သောအချက်အလက်များကိုအမည်ဝှက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့အလွယ်တကူလွှဲပြောင်းရန်ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့အပြင်သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၊ အလုပ်နေရာသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားသည့်နေရာများအပါအ ၀ င်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်နှင့်တိုင်ကြားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးလည်းသင့်တွင်ရှိသည်။ သင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆိုသင်ပြင်ဆင်လိုလျှင်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။ ထို့အပြင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးအခမဲ့ရယူနိုင်ရန်သင်ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သည့်မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်ကိုမဆိုဆုတ်ခွာနိုင်သည်။ သင်၏ ဦး စားပေးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်သွားပါမည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုမရုပ်သိမ်းမီထုတ်လုပ်မှု၏တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးအခမဲ့ရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားယခင်ကပေးခဲ့သည့်ခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏ ဦး စားပေးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်သွားပါမည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုမရုပ်သိမ်းမီထုတ်လုပ်မှု၏တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤအခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းသင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဤသည်အခြားနိုင်ငံများသည်သင်၏နေအိမ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူတူညီသောဒေတာကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်အတွက်လုံလောက်သောအကာအကွယ်ပေးမှုအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းသည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (များ) တွင်ထိန်းသိမ်းထားရန်အဆင့်များလုပ်ဆောင်ပါမည်။
သင်သည်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (EEA)၊ ယူကေသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရောက်နေပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအရအခွင့်အရေးနှင့်ကာကွယ်မှုအချို့ရှိပါသည်။ ကြည့်ပါ https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en သင်၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အတွက်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင့်လျော်သောအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအကာအကွယ်များအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ၀ န်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်စီးပွားရေးသိရန်လိုအပ်သောအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားသည်။ သူတို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်များပေါ်တွင်သာလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်လျှို့ဝှက်ထားရန်တာဝန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ထံမှအထိခိုက်မခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည့်အတိုင်းအတာအထိ (ဥပမာ၊ သင်၏ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်သို့မဟုတ်အခြားဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်) ၎င်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန် SSL encryption ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်အင်တာနက်ပေါ်မှထုတ်လွှင့်သည့်နည်းလမ်းများ (သို့) အီလက်ထရောနစ်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်း ၁၀၀% သည်လုံခြုံမှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်စီးပွားဖြစ်လက်ခံနိုင်သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အကြွင်းမဲ့လုံခြုံမှုကိုအာမခံမပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကသင်လုပ်နိုင်သည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်သံသယရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုကိုမဆိုကိုင်တွယ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့က၎င်းအားတရားဝင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့်သင့်အားသက်ဆိုင်သူများအားအမြဲတမ်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းသင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မူလကကောက်ယူခဲ့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သမျှကာလပတ်လုံးသိမ်းဆည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်ဥပဒေအရလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့မှအမျိုးမျိုးသောစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပမာအားဖြင့်သင့်အားတောင်းခံထားသောသို့မဟုတ်ပေးအပ်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝနှင့်အရှည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖျက်မိလျှင်သင့်အားပေးသောဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ သင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်အချို့၊ ဥပဒေအရပြဌာန်းထားသောထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလနှင့်ကန့်သတ်ချက်များ။
အချို့အခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (သင်နှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိစေရန်) သုတေသနသို့မဟုတ်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အမည်ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားထပ်မံအသိပေးခြင်းမရှိဘဲထိုအချက်အလက်များကိုအကန့်အသတ်မရှိသုံးနိုင်သည်။
ပြောင်းလဲမှုများ 10. အသိပေးစာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအသစ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများလိုအပ်ချက်များကိုဆန့်ကျင်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီကို ဆက်လက်၍ အကဲဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးပါ။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီအပြောင်းအလဲများကိုတင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်၏ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့်သင်သဘောတူရန်သဘောတူသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဤအပိုင်းသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစားသုံးသူများ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုအက်ဥပဒေ (သို့မဟုတ်“ CCPA”) အရကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများကိုရရှိသည့်အခွင့်အရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းခဲ့သည် - အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား (identifiers)၊ အင်တာနက်သို့မဟုတ်အခြားကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာကြည့်ရှုခြင်းအမူအကျင့်နှင့်အခြားအသုံးပြုမှုဒေတာများ)၊ တည်နေရာဒေတာ; (ဥပမာဝယ်ယူမှု ဦး စားပေးအဖြစ်) အခြ; လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက် (ဥပမာအသက်)၊ အီလက်ထရောနစ်၊ အမြင်အာရုံ (သို့) အလားတူသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ - ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ခေါ်ဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်); ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်နှင့်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ - သင်တင်ပြသည့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများတွင်ကဲ့သို့); နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာထုတ်ကုန်တုံ့ပြန်ချက်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသတင်းအချက်အလက်ကဲ့သို့) ။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးအစားများအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များ အထက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုဆောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မည်ပုံအသုံးပြုသနည်း အပေါ်ကအပိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်ကိုတတိယပါတီအမျိုးအစားတွင်ဖော်ပြထားသည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်မှု အပေါ်ကအပိုင်း
အချို့သောအကန့်အသတ်များရှိနေသော်လည်း CCPA သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း (ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများသို့မဟုတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူရန်တောင်းဆိုရန်အခွင့်အရေးကိုဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုသည်။ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်နှင့်ထိုအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးခြင်းအတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီကွတ်ကီးများနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုပေးပို့ရန်၎င်းကို CCPA အရရောင်းချခြင်းဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ဤ“ အရောင်းများ” မှရွေးချယ်ရန် support@lottery.com ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများသည် support@lottery.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်“ ဝင်ရောက်ရန်တောင်းဆိုခြင်း” သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်အကြောင်းဖိုင်၌ရှိသည့်အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုပါမည်။ သင်၏ကိုယ်စားဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးရန်အတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုလည်းသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသူအားသင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာရှိကြောင်းသက်သေပြရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏သက်သေခံအထောက်အထားကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်အတည်ပြုရန်တောင်းဆိုနိုင်သေးသည်။
ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကိုခွဲခြားသိမြင်စေရန်တစ် ဦး တည်းသော်လည်းကောင်းသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ သော်လည်းကောင်း၊ ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခု၊ အိမ်တစ်အိမ်သို့မဟုတ်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာများအပါအဝင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုဆိုလိုသည်။ သို့မဟုတ်အခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်။ ၎င်းတွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖယ်ရှားထားသောဒေတာ (အမည်မသိသောဒေတာ) မပါဝင်ပါ။
တရားဝင်အကျိုးစီးပွား ဆိုလိုသည်မှာသင့်အားအကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်အတွေ့အကြုံများပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုစီမံခြင်းနှင့်စီမံခြင်း၌စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်မီသင့်အား (ကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးပါဖြစ်စေ) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုချိန်တွယ်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရလျှင်သို့မဟုတ်ဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်မရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားများကသင်၏အပေါ်သက်ရောက်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးစီးပွားကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသုံးပါ။
တရားဝင်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းတာဝန်နှင့်အတူလိုက်နာပါ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည့်အခါသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။